Indlu encinci yasehlathini
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguFranco
On the Murgia iphezulu eCassano kukho i "Casetta Nel Bosco", i Lamia ilitye wamandulo, kwixesha elidlulileyo ikhusi ngamaxesha ukwenzela amafama kunye nemfuyo yabo, salungiswa yaye uguqulwe yokuhlala obutofotofo yesikhumba, ukuntywiliselwa ngokupheleleyo Iihektare ezimbini zomthi yabucala hlwele . Ilungele abo bathanda ukuhlala kumoya omtsha egameni lobumfihlo kunye nokuzola.
Ukuphumla, igumbi lokulala elikhulu eline-parquet kunye negumbi lokulala lesibini eline-mezzanine ukusuka apho unokubukela ihlathi ngelixa uhlala ebhedini. Kwigumbi lokuhlala elenziwe eLamia, ibhedi yesofa ekhululekileyo phambi kweziko.
Amagumbi okuhlambela amabini, elinye lineshawari elinye linebhafu ye-whirlpool kwabo bakhetha ukukhululeka.
Ulungiselela ukutya ekhitshini elixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo kwaye udle isidlo sasemini kwigumbi lokuhlala okanye ngaphandle phantsi kwepatio okanye emthunzini we-oki.
Kwisithili, kumgama weemitha ezimbalwa, kukho izindlu zasefama ezinokutya okumnandi kunye namatheko, ukukhwela amahashe kunye nokukhwela ibhayisekile kane, amadama okuqubha kunye nomzila omkhulu wekarting. Ngaphandle kokulibala ukuba iCassano iyindawo ephakathi ngokubhekiselele kwiindawo ezahlukeneyo zokuchithela abakhenkethi. Siyavuya ukunika iingcebiso malunga neendawo zokutyela kunye neendawo ezilungileyo zokuzibona kwindawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Franco
Siyafumaneka kwiindwendwe zethu kulo lonke ixesha lokuhlala kwazo ukuze siqinisekise ukuba zihlala zimnandi kwaye ziphumla.